Aseho Poster LED ho an'ny anatiny China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Led Billboard Advertising,Ny efijery amin'ny dokambarotra anatiny,Led Walking Billboard
Home > Products > Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin&#39;ny gorodona ivelany > Aseho Poster LED ho an&#39;ny anatiny
Inona no dikan'ny P amin'ny P2, P3, P4 ...
P no litera voalohany ary maneho pikselaka. Ny isa aorian'ny P dia ny halaviran'ny piksel, mm ny unit no mm. P2 no 2mm pitch dia 2mm, ary ny ambiny dia azo esorina amin'ny alalàn'ny analogy. Ny kely kokoa ny sandan'ny P, ny pikantsary maro kokoa any amin'ny faritra misy ny unit, ary ny mahery kokoa ny fahaizana manamaivana ny sary, izany hoe, mazava kokoa.One pika, ny efijery monochrome dia monochrome LED, ary ny efijery loko dia vondrona RGB LED. Misy antsoina hoe stickers ambony tarehy sy tapa-takelaka tanany rehetra.
Mifoka, ny hamandoana, mpamily ny mari-pana
Ny efijery amin'ny dokambarotra anatiny
Led Show for Advertising
Led Screen Wall Advertising Screen